Media sy Fanoratan-gazety · Septambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Septambra, 2018
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Septambra, 2018
Milaza ny Venezoeliana fa tsy afaka miditra amin'ny tolotry ny Google izy ireo
Amerika Latina 28 Septambra 2018
Mampaneno ny lakolosy fanairana ary milaza ny mety ho fanamafisana ny fanaraha-maso ny fifandraisana sy ny vaovao ny tatitra vaovao momba ny fanakanana ny aterineto.
Zeorzia: Hiaraka hatory amin'i Shorena ve ianao?
Zeorzia 28 Septambra 2018
Nanantena ny hanao revolisiona ara-pananahana ny fandaharana kanefa tsy nahomby satria efa nandositra ny toe-tsaina hoe "tsy mila firaisana ara-nofo eto URSS" i Zeorzia. Efa lohahevitra tsy fady intsony izany ary angamba efa nisy ny revolisiona ara-pananahana, saingy tamin'ny fomba malefadefaka.
Nosamborina noho ny fanamarinana ny zava-misy: Nampandoavin'ny fitsarana Kazakh onitra ilay Okrainiana mpanao gazety
Azia Afovoany sy Kaokazy 27 Septambra 2018
Mampiseho ny fankalahan'ny manampahefana ny adihevitra momba an'i Okraina ao Kazakhstan sy ny tolona naharitra ela niaraka tamin'ny gazety ao an-toerana ny zava-misy.
Eoropa Andrefana 27 Septambra 2018
Nikarakara ny fifaninanana iraisam-pirenena fanao isan-taona fahaenina amin'ny loka Bilaogy Tsara Indrindra 'BOBs' ny Deutsche Welle. Tamin'ity taona ity dia nisy loka vaovao ho an'ireo bilaogera tsara indrindra niresaka momba ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny sokajy vaovao ho an'ny fiteny Bangla (Bengali) ihany koa.
Azia Atsimo: Mariazy ifanarahana, firongatry ny bilaogy Hindi, fotoana ho an'ny fanovana fitondrana ao Pakistan, vehivavy ao Afovoany Atsinanana
Azia Atsimo 27 Septambra 2018
Ny malaza indrindra farany avy amin'ny bilaogy isan-karazany Aziatiaka Atsimo
Momba ny Fanoratana Bilaogy Any Amin'ny Faritra Misy Fifandirana
Afrika Mainty 25 Septambra 2018
''Nandritra ireo roapolo taona lasa, olona mihoatra ny iray tapitrisa ao avaratra no miaina ao anatin'ny toby natokana ho an'ny Olona Nafindra Monina ao antin'ny taniny ihany (IDP), matahotra ny fanafihana mety hataon'ny Lord's Resistance Army (LRA) (LRA) sy ny herisetra asehon'ny fanjakana isanandro. ''
Oganda: Fanontaniana, Fiara, Very asa noho ny bilaogy
Afrika Mainty 15 Septambra 2018
Nahoana no mbola miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny Ogandey an-tapitrasany kanefa mihamaro ny olona ao amin'ny firenena afaka mividy marika kodiarana vaovao isa-taona sy takelaka manokana ho an'ny laharan'ny fiara?
Ejypta: Ny Andian-tantara Mpanjaka Farouq
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Septambra 2018
Raha nitsidika ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana ianao tato ho ato, dia mety hitanao ny resabe manodidina ny mpanjaka farany Ejypsiana Mpanjaka Farouk; ary tsy mahagaga, satria ny tantara mitohy "Mpanjaka Farouk", nosoratan'i Lamis Jabber, dia nalefa tao amin'ny fantsona zanabolana MBC1.
Miangatra mamely an'i Shina ve ny media tandrefana? (Fizarana voalohany)
Azia Atsinanana 14 Septambra 2018
Nilaza i Shina fa mitongilana mamely azy ny media tandrefana. Nanao fitsapana izany filazana izany izahay tamin'ny fampiasana fitaovana fanadihadiana data anankiroa.